50 qof oo Oslo xaflado(fester) ka dhacay ka qaaday Corona-virus. - NorSom News
50 qof oo Oslo xaflado(fester) ka dhacay ka qaaday Corona-virus.
Isku dar 50 qof ayaa la xaqiijiyay in laga helay xanuunka coronavirus, kadib markii ay ka qeybqaateen afar xafladood oo ka dhacay galbeedka magaalada Oslo. Tirada ayaa la fili karaa inay intaas ka badato, maadaama jawaab laga sugato 220 qof oo dadka xanuunka laga helay xiriir la sameeyay ama ay hal goob wada joogeen.
Heyáddaha dowlada iyo kuwa caafimaadka ayaa aad uga shaqeynayo in la daba galo dadka looga shakisanyahay inay xanuunka qaadi kareen ee dadkaas xanuunka laga helay ka ag dhawaa.
Xigasho/kilde: Nå topper Oslo Vest smittestatistikken.
Previous articleNå!: Bergen: Dhowr qof oo mindi lagu dhaawacay
Next articleSoomaalida Denmark oo faquuq Corona la xiriira kala kulmayo warbaahinta.